Nea Ɛto So Abien A Ɔde Kɔmaa Korintofo 13:1-14
Kɔkɔbɔ a etwa to ne afotu (1-14)
“Monkɔ so nsɔ nhwɛ sɛ mowɔ gyidi no mu anaa” (5)
Momma wonnye mo nsi yiye; munnya adwenkoro (11)
13 Eyi ne ne mprɛnsa so a mereba mo nkyɛn. “Ɛsɛ sɛ asɛm biara gyina adansefo baanu anaa baasa adanse* so.”+ 2 Ɛwom sɛ seesei minni hɔ de, nanso ɛte sɛ nea mewɔ mo nkyɛn ne mprenu so. Meredi kan abɔ wɔn a wɔayɛ bɔne, ne wɔn a aka no nyinaa kɔkɔ sɛ, sɛ mesan ba bio a, merenhu wɔn mmɔbɔ, 3 efisɛ morehwehwɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Kristo nam me so kasa ampa, Kristo a ɔnyɛ mmerɛw wɔ mo fam, na mmom ɔwɔ tumi wɔ mo mu no. 4 Ampa, wɔbɔɔ no asɛndua mu esiane mmerɛwyɛ nti, nanso Onyankopɔn tumi nti, ɔte ase.+ Ɛyɛ ampa nso sɛ, yɛyɛ mmerɛw te sɛ nea na ɔyɛ mmerɛw no, nanso tumi a mo nti Onyankopɔn da no adi+ no nti, yɛne no bɛtena ase.+ 5 Monkɔ so nsɔ nhwɛ sɛ mowɔ gyidi no mu anaa; monkɔ so nhwehwɛ* mo mu nhwɛ sɛnea mote ankasa.+ Anaa munnye ntom sɛ Yesu Kristo wɔ mo mu? Gye sɛ ebia momfata. 6 M’ani da so paa sɛ mubehu sɛ yɛyɛ nnipa a yɛfata. 7 Afei yɛbɔ Onyankopɔn mpae na moanyɛ bɔne biara. Ɛnyɛ sɛ yɛpɛ sɛ nkurɔfo hu yɛn sɛ yɛfata ntia, na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ nkurɔfo hu yɛn sɛ yɛmfata mpo a, mo de, mobɛyɛ adepa. 8 Yɛrentumi nyɛ biribiara ntia nokware no, na mmom, nea yɛyɛ biara, yɛyɛ ma nokware no. 9 Bere biara a yɛbɛyɛ mmerɛw na moayɛ den no, yɛn ani gye yiye. Na eyi ne nea yɛbɔ ho mpae, sɛ wɔbɛkɔ so agye mo asi yiye. 10 Ɛno nti na bere a minni mo nkyɛn yi, merekyerɛw eyinom abrɛ mo no, sɛnea ɛbɛyɛ a, sɛ meba a, tumi a Awurade de ama me no, meremfa nni dwuma denneennen.+ Efisɛ ɔde maa me sɛ memfa nhyɛ mo den, na ɛnyɛ sɛ memfa mmu mo abam. 11 Ne korakora no, anuanom, monkɔ so nni ahurusi, momma wonnye mo nsi yiye, momma wɔnkyekye mo werɛ,+ munnya adwenkoro,+ montena asomdwoe mu.+ Na ɔdɔ ne asomdwoe Nyankopɔn+ no ne mo bɛtena. 12 Momfa mfewano kronkron nkyiakyia mo ho. 13 Akronkronfo no nyinaa kyiakyia mo. 14 Yɛn Awurade Yesu Kristo adom ne Onyankopɔn dɔ ne honhom kronkron a ɛreboa mo no nka mo nyinaa.
^ Anaa “mpɛɛpɛɛ.”